ओलीको अर्को चलाखी, भित्रभित्रै राजेन्द्र महतोको नागरिकता छानबिन ।। वास्तविकता हेर्नुहोस ! - News20 Media
ओलीको अर्को चलाखी, भित्रभित्रै राजेन्द्र महतोको नागरिकता छानबिन ।। वास्तविकता हेर्नुहोस !
May 26, 2021 N20LeaveaComment on ओलीको अर्को चलाखी, भित्रभित्रै राजेन्द्र महतोको नागरिकता छानबिन ।। वास्तविकता हेर्नुहोस !
पटक पटक मन्त्री भएका महताको राजनीतिक सफलतामा भारतको भूमिका रहेको बताइन्छ । भारतको इच्छाअनुसार काम गर्ने भएकाले उनले राजनीतिमा सफलता पाउँदै आएका छन् । भारतबाट नेपाल आउने गाडीलाई सरकारले कर बढाउँदा उनले संसदमा त्यसविरुद्ध अर्थात् भारतीय नागरिकको पक्षमा बोलेका थिए ।
अभिव्यक्तिबाट विवादमा आउने गरेका वन तथा वातावरण मन्त्री ,छलाछुल्ल भए ।
बाढी पहिरो र डुबान हुनसक्ने, बच्नका लागि यी उपाय अपनाउनुहोस्
सशस्त्रले खुलायो नयाँ भर्ना
प्रधानमन्त्री ओलि र स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी बिच ३२ करोड कमिसनको बिषयमा चर्कियो विवाद।।त्रिपाठिलाई पदबाट हटाउने गृहकार्य पूरा।।